Oromo Student Protests Against Addis Ababa Master Plan Spread Across Major Oromian Universities
Day two rally at Wallagaa University. At the most recent rally at Wallagaa University in western Oromia, Ethiopia’s army and police opened fire with live ammunition injuring unknown numbers of students and terrorizing others into fleeing the campus to hide in nearby forests, according to a report obtained from the April 26 broadcast of Oromo Voice Radio, in Afan Oromo.
Ambo University students alongside residents of the town of Ambo, in central Oromia,took to the streets in several hundreds and protested the master plan on April 25,2014. The students marched chanting slogans, such as “Oromia belongs to the Oromo people,” and “Finfinne is the heart (center) of Oromia,” highlighting a long-standing Oromo yearning for self-government and freedom from colonial oppression.
Another contingent of Oromo students staged a similar rally at Haromaya University, eastern Oromia, emphasizing that the Oromo people are not going to “cut and give away” cities and rural districts of Oromia to Abyssinian colonial powers in Addis Ababa. They demanded the release from prison of Oromo singer Jafar Yusuf, who released a music video protesting the master plan, which became the cause for his imprisonment. They also demanded Afan Oromo, the Oromo language, be made a federal official language. Haromaya Univesity students demanded an end to killings, imprisonment and torture targeting the Oromo people.
Image of Artist Jafar Yusuf from Qeerroo.
Baratoon Oromoo Yuunbaristii hunda keessa jira Hawwassa Oromoo degersa gafacha jiru. Ani Oromoo dha kan jeedhu hundi gaafi mirga uni gaafanuu akka nu degertan isiin gaafana.
1. Oromoo biyya keessa jiru hundi yakka Naannoo Godina Adaa Finfinne irrati dalagama jiru akka Murmuu;
2. Uumanii Godiina Adda Finfinee keessa jiru Gibira kafaluu diduun Mootuùmma Ethiopiaf Ajeejamuu akka dhabuu;
3. Oromoon biyya Alaa jirtan biyya jirtan keeysatti Hiriira nagayaa bahuudhaan Baratoota Hidhamaa jiran gargaruun Qabsoo Baratoota Oromoo akka deeggaramuu fi Motummaa Adunyaa hunda irrati akka iyyatanii fii mirga oromummaa keenyaa falmachuutu isin boonsa gammachuun keenya injifannoo qabsoo nuuf haa ta'u
4. Baratooni Sadarka 1faa fi Sadarka Lamafaa Qabsoo Baratoota Yuunibarstii birra dhabachuun falamii akka gootan;
5. Dhabbileen siyyasa Oromoo OPDO dabalatee gaafi mirga Oromoo dhiyeessa jiru kana akka degertan;
6. Hojeetan Mootumma fi Miseensoon OPDO hundi gaafi fi feedhi saba Oromoo akka degetan Kabajan Gafaan.
7. Abdulaziiz fi Kuma Harka keessan xuurii Oromoo irra kassa Oromoon hubannoo qaba kan Hubannoo hin qabne isiin laman!!!
8. Median Oromoo Dargagoon Oromoo Falmii keenya sa'aa 24 itti fufuu qaba, Ethiopian Oromoo salphiftuu jirachuu hin qabduu, Ethiopian Oromoo hin kabajnee Karta Adunyaa irra baduu qabdi !!!
9. Uummani Oromoo Uumataa Ukraina kana irra barachun mirga isaaf falmachuu qaba, uumani qabsa’ee mirga isaa ni kabachifata, caalisuun diinaf of saxiludha !!!
10. Kuma Demekssa fi Abdulazizi Mohamad Dhigga baratoota Oromooti qoosuu hin danda'aan Hanqina hubannoo kan qabu Ergamtoota TPLF malee uumataa Oromoo miti !!!
11. Uumaani keenya waan hunda irra nu caala, abban angoo, abban qabsoo, abban biyya fi abban murtii uumata keenya, Dhaabbbi kami ilee, ooganni kami ilee uumataa Oromooo ol miti, Kanaafu xiyyfannoon keenya Feedhi, Gaafii fi mirga umataa kabajisuu irrati hanga wareegama lubuti hojeechuu qabna !!!
Finfinnen kan Oromooti!!!
Godiina Adda Oromiyya kutuun Morma Oromoo kutudha!!
Gaafi fi Dhadannoo Baratoota Oromoo Yuunbarsitii adda adda irra dhiyacha jiru.